सेरोफेरो : खाने तेल, ठूलो चलखेल
यसो नजर डुलाउँदा धारा नामक तोरीको तेलको भाउ पनि एकाएक ३ सय २० रुपैयाँ प्रतिलिटर प्रिन्ट भएर आएको पनि देख्न पाइयो। यसले दह्रो मुटु चाहिन्छ भन्ने बिज्ञापन खुब ठेलेको थियो क्यारे। ऐले त किन्न पनि दह्रै मुटु चाहिने रैछ। पहिला यसैको भाउ १ सय ८० हाराहारीमा थियो भन्ने कुरा पसलेहरूले सुनाए। धेरै सामान गुटमुटाएर ल्याउने भएकाले पहिला पसल पुग्दा भाउ सोध्ने चलन कम थियो आफ्नो। ऐले भाउ नसोधी र खल्ति नछामी किन्ने चलन हरायो। बजार कसरी चलेको छ भन्ने चासो भने ऐलेको जाडो भन्दा धेरै बढेको थियो मेरो मनमा। मोबाइलले चुट्टचुट्ट फोटो खिच्दै पसल चाहर्ने बिचार आयो। कोठामा आउँदै गर्दा म धेरै किराना पसलहरूमा सोधखोजकोलागि पसेँ। होलसेल खाद्य पसल देखि साना खुद्रा पसलसम्म। धेरैमा खानेतेल थिएनन्। नयाँ वानेश्वर खरिवट आडैको पसलमा त्यही दुईसय ९५ प्रिन्ट भएको सनफ्लावर तेललाई २ सय ७० मा दिन सक्ने पसल्नी दिदीले बताईन्।
‘किन लेखेको भन्दा घटाएर बेच्न लाग्नु भो त ?’ खिस्याउने प्रश्न सुन्ने बित्तिकै उनको उत्तर थियो, ‘अब दिने भए दिनुस् न त २ सय ९५ नै, हाम्ले होलसेल भएर पो कममा दिएको त।’
यो होलसेल भन्ने रेडिमेड उत्तर बिक्रेतालाई डिलरले नै सुनाएको हुनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामी होलसेलमा भएकाले थोरै घटाएको हो भन्ने दाबी आउथ्यो। पान पसलेलेले चर्को मुल्यमा पेट्रोल बेचेर ‘होलसेलमा हो’ भन्ने दिन आएको बेलामा किराना पसलको बोलबाल सानो हुने कुरै भएन। मैले झोला देखाउँदै फुयाट्टै पसल्नी दिदीलाई भन्दिएँ, ‘२ सय ५० मा ल्याएछु हेर्नुहुन्छ?’
उनले जिब्रो टोक्दै भनिन्, ‘हैन होला ढाँट्नु भो।’ आफूले केही अघिल्तिरको पसलबाट ल्याएको सुनाएपछि उनले अझै पत्याइनन्। उनलाई धेरै बुझाइरहन ठिक नलागेपछि म डेरा पुग्ने बाटो तिरै केही उत्तर लागेँ। बाटैको अर्को पसलमा धारा नामक तोरीको तेललाई २ सय २८ मा बेचिँदै थियो। ‘यो पुरानो स्टक हो, तपाईलाई प्रिन्टकै दाममा दिँदैछु,’ व्यापारीले भने। हुन पनि सोही तेल अघि भर्खरै जम्मा मुल्य ३ सय २० प्रिन्ट भएर बजारमा बेच्नको लागि राखिएको मैले देखेरै आएको थिएँ। अब उहि कम्पनीबाट उत्पादित यि दुईको उत्पादन मितिमा जम्मा एक महिनाको अन्तर थियो। एक महिनामै मुल्य अन्तर सय हाराहारीले बढेको छ। अझ त्यो भन्दा पहिलाको वास्तविक मुल्य १ सय ७५ हाराहारीलाई आधार मान्य हो भने त झण्डै पैतालिस प्रतिशत बढेको छ, आन्दोलनका नाममा। अक्टोबरमा एक सय पन्चानब्बे भएको सुर्यमुखी तेल नोभेम्बरमै दुईसय ९५ कसरी भयो ? एक महिनामै तोरीको तेलमा पनि सय रुपैयाँ कसरी बढ्यो ? एक आम उपभोक्ताको यो मनमा अनेकौं प्रश्न आए। मनको प्रश्नसँगै झप्लक्कै साँझ परेकाले फोनमा घरको प्रश्न पनि आयो, ‘तेल पाइयो त ?’
‘तेल पनि पाइयो अब घर पनि आइयो,’ मैले कुरो छोट्टाएर फोन काटेँ। आज त महंगै तेलले भएपनि तरकारीको स्वाद मिठो बनाउँला। तर व्यापारीले सरकारलाई कहिलेसम्म तेल घसिरहने हो ? हामीले व्यापारीलाई कहिलेसम्म पोसिरहनु पर्नेहो ? सरकारलाई एक आम उपभोक्ताको प्रश्न हो यो, ‘कानमा तेल कहिलेसम्म ?’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १७, २०७२ १५:४३:०७